သြဂုတ်လမှာ ရုံတင်တော့မယ့် ဂျောင်ဟယ်အင်းနဲ့ ကင်ဂိုအွန်းတို့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ပိုစတာ ထွက်ပေါ်လာ - Yangon Media Group
ဆိုးလ်၊ ဇူလိုင် ၁ဝ
မင်းသား ဂျောင်ဟယ်အင်းနှင့် မင်းသမီး ကင်ဂိုအွန်းတို့ ဦးဆောင် ပါဝင်ထားကြသည့် အချစ်ရုပ်ရှင် Yoo Yeols Music Album ၏ ပိုစတာအသစ်ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။
အမှတ်တမဲ့တွေ့ဆုံမှုမှ ချစ် မြတ်နိုးခဲ့ကြသည့် ယောင်ဝူးနှင့် မီဆိုအမည်ရှိ လူနှစ်ဦးအကြောင်း ဇာတ်အိမ်တည်ထားသည်။ ၎င်းင်းတို့နှစ်ဦးသည် အချိန်လွန်မှ တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သော်လည်း နှစ်ဦးသား နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ကြသည်။ အခြေအ နေ မတူညီမှုများမှ တူညီသော နေရာတစ်ခု ဆီအရောက်သွားခဲ့ ကြသည့် ချစ်သူနှစ်ဦး၏ဘဝကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ပိုစတာအသစ်သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကာလကို နောက်ခံထားပြီး မီဆူနှင့် ယောင်ဝူးတို့ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့ရာနေရာနှင့် ¤င်းတို့နှစ် ဦး၏ ပျော်ရွှင်ရဆုံးအချိန်အတန့်များရှိရာနေရာဖြစ်သည့် မီဆူ၏ စားဖိုဆောင်ရှေ့တွင် ရိုက်ကူးထားသည်။ ပုံစာတွင် ‘နောက်ပြန်လည့် ချင်တဲ့အခိုက်အတန့်ရှိရာ အချိန်’ ဟုဖော်ပြထားသည်။
Yoo Yeols Music Album ရုပ်ရှင်ကိုလာမည့် သြဂုတ်လအတွင်း ရုံတင်ပြသရန် စီစဉ်ထားသည်။ မင်းသား ဂျောင်ဟယ်အင်း သည် MBC ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်နေသည့် One Spring Night ဒရာမာတွင် မင်းသမီး ဟန်ဂျီမင်းနှင့်အတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ မင်းသမီး ကင်ဂိုအွန်းသည် နာမည်ကျော် စာရေးဆရာမ ကင်အွန်းဆော့၏ ထူးခြားဆန်း ကြယ်ဒရာမာတွင် မင်းသား လီ မင်းဟိုနှင့်အတူ ပါဝင်မည်ဟု အတည်ပြုထားသည်။
မိုးညှင်းမြို့မှ ဒေသခံ ကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်သူများ နေရာအတည်တကျ မရှိသေးသဖြင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၌ ရောင်းဝယ်နေကြ
အယ်လ်ဘမ် အသစ်ထဲမှာ ပါဝင်မယ့်သီချင်းကို ကြိုတင်ဖြန့်ချိလိုက်တဲ့ ဘီယွန်းစေး
တစ်နှစ်နှင့် ငါးလအတွင်း မြဝတီမြို့ပြန်လည် ကြိုဆိုရေးစခန်းသို့ အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာအလုပ်သ?
ကွာရှင်းဖို့ အချိန်ဆွဲထားလို့ အင်ဂျလီနာဂျိုလီကို စိတ်ပျက်နေတဲ့ ဘရတ်ပစ်
ဆွာချောင်း ရေလှောင်တမံ ရေပိုလွှဲပဲ့ကျမှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များပြား၊ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း
သန်လျင် သဘာဝတရားရိပ်သာ အတွင်း ၁၂ ထပ်ရှိမည့် အထပ်မြင့်ရိပ်သာသစ် တည်ဆောက်မည်၊ Ecosystem ပရောဂျက်မ??